ဟင်နရီ (ရေကြောင်းလမ်းပြသူ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒွန် အန်းနရစ်၊ ဗစ်ဇယူးနယ်စား၊ ပေါ်တူဂီ (အင်္ဂလိပ်: Dom Henrique of Portugal, Duke of Viseu) သည် ပေါတူဂီအင်ပါယာခေတ်၏ အစောပိုင်းနေ့ရက်များနှင့် ၁၅ ရာစု ဥရောပတိုက်သားတို့၏ ရေကြောင်းနယ်ပယ်ချဲထွင်ခြင်း၊ ရှာဖွေစူးစမ်းခြင်းနယ်ပယ်တို့တွင် အဓိကအခရာကျသောသူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ရေကြောင်းပြ ဟင်နရီ (Henry the Navigator) ဟူသောအမည်ဖြင့် အသိများလေသည်။ ၎င်း၏စီမံပေးမှုများမှတဆင့် ဟင်နရီကို "စူးစမ်းရှာဖွေရေးခေတ်" (Age of Discovery) ၏ စတင်ဆောင်ရွက် ကမကထပြုသူဟူ၍ သတ်မှတ်ကြသည်။ အေဗစ်အိမ်တော်(နန်းဆက်) ကိုတည်ထောင်ခဲ့သော ပထမမြောက် ဂျွန် (ပေါ်တူဂီ) ၏ စတုတ္ထသားတော်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သည်။
ဗစ်ဇယူးနယ်စားမင်း (Duke of Viseu)
Infante Dom Henrique; St. Vincent Panels[မှတ်စု ၁]
၁၃ နိုဝင်ဘာ၊ ၁၄၆၀(1460-11-13) (အသက် ၆၆)
ပေါ်တူဂီ၊ Sagres, Portugal
၁၄၈၅ ခုနှစ်တွင် ဂျီဗရောတာနှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် အာဖရိကကမ်းခြေပေါ်ရှိ စူးတားမြို့ကို တိုက်ခိုက် သိမ်းယူရာ၌ နာမည်ထင်ရှားလာခဲ့သည်။ အာဖရိကတိုက်၌ မူးအားလူမျိုးများနှင့် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရစဉ်က သူသည် ထိုခေတ်က လူသူအရောက်အပေါက် နည်းပါးသော အနောက်ဘက်ရှိ သမုဒ္ဒရာကြီး အကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ အာဖရိကတိုက်ကြီးအကြောင်းကိုလည်းကောင်း၊ ပိုမိုသိရှိလိုသော ဆန္ဒပြင်းပြခဲ့လေသည်။
သို့ဖြစ်၍ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်တွင် နန်းတော်ကြီးမှ ထွက်ခွာခဲ့၍ စိန့်ဗင်ဆင်အငူအနီးတွင် နက္ခတာရာကြည့်မျှော်စင်တစ်ခု ဆောက်လုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ပညာရှိများ၊ မြေပုံရေးဆွဲ သူများနှင့်အတူ မြေပုံများ ရေးဆွဲခြင်း၊ နယ်ပယ်သစ်များ လှည့်လည် ရှာဖွေရန် စီစဉ်ခြင်း စသည်တို့နှင့်သာ အချိန်ကုန်စေခဲ့သည်။ ထိုနောက် ရေကြောင်း အတတ်သင်ကျောင်း တစ်ကျောင်း ဖွင့်လှစ်၍ လူငယ်များကို စုရုံးကာ ရေကြောင်းအတတ်ကို ကျကျနနန သင်ပေးပြီးလျှင် နယ်ပယ်သစ်များကို ရှာဖွေရန် သင်္ဘောများနှင့် စေလွှတ်ခဲ့သည်။
သူ့လူများသည် တစ်စုပြီးတစ်စု အရဲစွန့်၍ သင်္ဘောလွှင့်သွားကြရာ၌ အဇိုး၊ မဒီးယားနှင့် ကနေရီကျွန်းစုများကို တွေ့ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင် ကိပ်ဗတ်(ဒ)ကျွန်းများကို ကျော်လွန်၍ အာဖရိက ကမ်းခြေတလျှောက်တွင် ဆီးယားရားလေအွန်းအထိ ရောက်ခဲ့ကြသေးသည်။ သူတို့သည် နယ်ပယ်သစ်များ ရှာဖွေရုံသာမက ခရီးသွားဟန်လွဲ ဆိုသလို အာဖရိတိုက်ရှိ တိုင်းရင်းသားများကို ဖမ်းဆီးကြပြီးနောက် ရောင်းဝယ်ခြင်းဖြင့် ကျွန်ကုန်ကူးခဲ့ကြလေသေးသည်။
ဟင်နရီမင်းသားသည် သူကိုယ်တိုင် စွန့်စားသွားလာခြင်း မပြုခဲ့သော်လည်း အခြားသူများကို စွန့်စား သွားလာစေရန် ငွေအား လူအားဖြင့် အမြဲကူညီခဲ့၏။ သူငွေကုန်ကြေးကျခံ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းများမှ ဟင်နရီသည် အကျိုးကျေးဇူး ခံစားမသွားခဲ့ရချေ။ သူကွယ်လွန်ပြီးနောက်မှ ဒီအတ်၊ ဗက်စကိုဒါဂါးမ စသော သင်္ဘောသားများသည် အိန္ဒိယသွားပင်လယ်ခရီးလမ်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့၍ သူ၏ ရည်မှန်းချက်များ အကောင်အထည်ပေါ်ခဲ့လေသည်။ သူကသာ အားပေးကူညီခြင်း မပြုခဲ့လျှင် ပေါ်တူဂီ သင်္ဘောသားတို့သည် အရှေ့တိုင်းသို့ ရေကြောင်းမှ တောက်လျှောက် ရောက်နိုင်ကြမည် မဟုတ်ချေ။ သို့ဖြစ်၍ ဟင်နရီမင်းသားမှာ သူတို့၏ ကျေးဇူးရှင်ကြီး ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပေမည်။ ၁၄၆ဝ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် ဟင်နရီ မင်းသား ကွယ်လွန်လေသည်။ 
↑ Ivana Elbl, "Man of His Time (and Peers): A New Look at Henry the Navigator." Luso-Brazilian Review 28.2 (1991): 73-89.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟင်နရီ_(ရေကြောင်းလမ်းပြသူ)&oldid=660243" မှ ရယူရန်
၁၈ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၀၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။